किन गरे सन्तोषले युवतीमाथि सिरिञ्ज आक्रमण? – मुलधार न्युज
Home > समाचार > किन गरे सन्तोषले युवतीमाथि सिरिञ्ज आक्रमण?
१३ असार २०७६, शुक्रबार १२:४०
काठमाडौं -नेपाल प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकामा युवतीहरूमाथि सिरिन्जले आक्रमणमा गर्ने युवालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। महाराजगञ्जबाट बिहीबार राति पक्राउ गरिएका ३० वर्षीय सन्तोष कार्की रहेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ।
महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा आफूले नै आक्रमण गरेको कार्कीले स्वीकारेका छन्। ‘मैले सिरिन्ज हानेको होइन, ढलानको काँटीले घोचेको हुँ’, पक्राउ परेपछि प्रहरी अधिकारीसँग बयान दिँदै उनले भनेका छन् ।
उनले आफूले मजाकका लागि घोचेको बताएका छन् । त्यस्तै सबै घटना आफैले घटाएको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौं प्रहरी प्रमुख उत्तमराज सुवेदीका अनुसार कार्की मानसिक बिरामी हुन् । किन र के कारणले आक्रमण गरे भन्ने बारेमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको परिसर प्रमुख उत्तम सुवेदीले जानकारी दिए।